Phenylpiracet ၏စျေးကွက်အတွက်7အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)
/ဘ‌‌လော့ခ်/ပြတိုက်/-Phenylpiracet ၏စျေးကွက်အတွက်7အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)
အပေါ် Posted 09 / 12 / 2018 by ဒေါက်တာပက်ထရစ် Young က ရေးသားခဲ့သည် ပြတိုက်. ဒါဟာရှိပါတယ် 50 မှတ်ချက်.
Phenylpiracetam အဆိုပါ nootropic မူးယစ်ဆေး piracetam တစ် phenyl ဆင်းသက်လာသည်။ ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်တိုးပွါးခြင်းနှင့်အအေးများနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုဆန့်ကျင်သည်းခံစိတ်တံခါးခုံကိုထစေ၏။ တိရိစ္ဆာန်သုတေသန antiamnesic, လက္ခဏာ, anticonvulsant, antipsychotic, anxiolytic နှင့်မှတ်ဉာဏ်တိုးမြှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအကြံပြုထားသည်။ ဒါဟာဒီဇိုင်နာလှုံ့ဆော်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့် doping စာရင်းတွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစစ်တပ်အသုံးပြုရန်နှင့်အားကစားများအတွက်ဖြစ်ကောင်းရုရှားနိုင်ငံအတွက် 1980s အတွက်တီထွင်ခဲ့သည်။
ပြင်ပဖေါ်ထုတ် / ဒတောဘေ့စျ
CAS number ကို 77472-70-9
ဝင်း၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဖော်မြူလာနှစ်ခု isomers ရှိပါတယ်: S နှင့် R. နှစ်ဦးစလုံးလက္ခဏာအဖြစ် psyche အပေါ်အပြုသဘောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ S-ပုံစံမတူဘဲ, ဒါ့အပြင်ထိုကဲ့သို့သော memory နဲ့မိန့်ခွန်းအဖြစ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုသက်ရောက်သည်, နောက်ပိုင်းသို့သော် R-isomer, အစွမ်းရှိ၏။ ဒါဟာဦးနှောက်ထဲမှာအာရုံကြောဆက်သွယ်မှုကိုမြှင့်လုပ်ဆောင် RNA များ၏ပေါင်းစပ်ပိုကောင်းစေပါတယ်, အကောင်းဆုံး, အသွေးထောက်ပံ့ရေးပေးပါသည်။ SR - phenylpyrazetam ၏တတိယပုံစံ (phenotropil) လည်းရှိပါသည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများပေါင်းစပ်ထားတဲ့, နှစ်ဦးစလုံး isomers တစ် racemic အရောအနှောဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စုပ္ပန်မှာမူးယစ်ဆေး၏စင်ကြယ်သော R-isomer ရောင်းရန်မရရှိနိုင်။ သငျသညျ phenylpyricetam အားနည်းအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါလိမ့်မယ်ဝယ်လျှင်ထိုကွောငျ့, သတိပြုရကြမည်။ အဆိုပါသောက်သုံးသောလုံလောက်လျှင်, ဖြစ်ကောင်းဒီဒြပ်ပေါင်း၏ S-ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန် SR-form ကိုမဆံ့, နှင့်မူးယစ်ဆေးအပေါငျးတို့သအားသာချက်များကိုပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
ဒါဟာ CNS တစ်လှုံ့ဆော်ခြင်း, locomotor စနစ်, အားကစားစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့် piracetam ထက် 30-60 ဆပိုမိုအစွမ်းထက်သောအမှု၌တစ်ဦး nootropic, သကဲ့သို့လူသားများတွင်အသုံးပြုသောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများလှုပ်ရှားမှုတိုးမြှင့် antiamnestic, လက္ခဏာ, anticonvulsant, antipsychotic, anxiolytic နှင့်မှတ်ဉာဏ်ကိုပြ။
အနည်းငယ်သေးငယ်တဲ့လက်တွေ့လေ့လာမှုများထိုကဲ့သို့သောနှောက်သွေးကြောများ၏တွေ့ရှိရပါသည်, craniocerebral စိတ်ဒဏ်ရာနှင့် glioma အချို့အမျိုးအစားများကဲ့သို့အချို့ encephalopathic အခြေအနေများ, ၏ carphedone နှင့် amelioration ၏ဆေးညွှန်းအကြားဖြစ်နိုင်ခြေအသင်းအဖွဲ့များပြသခဲ့ကြသည်။
ဒါဟာသည် benzodiazepine diazepam ၏စိတ်ကျရောဂါအရေးယူနောက်ကြောင်းပြန်စစ်ဆင်ရေးအပြုအမူတိုးတက်ကောင်းမွန်, Post-လှည် nystagmus လျော့ကျစေပါတယ်, retrograde သတိမေ့ခြင်းဆန့်ကျင်ကာကွယ်ပေးသည်နှင့် anticonvulsant သတ္တိလည်းရှိတယ်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, phenylpyracetam ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်ရဲ့အာဏာအရှိဆုံး nootropic မူးယစ်ဆေးဝါးများတယောက်ကိုခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာမှတ်ဥာဏ်ချို့ယွင်း, မိန့်ခွန်း, ဒါမှမဟုတ်လှုပ်ရှားမှုညှိနှိုင်းနဲ့ဆက်စပ်လေးနက်ရောဂါများအပေါ်တစ်ဦးခိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအတွက်တိကျစွာဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Phenylpyracetam ကိုခေါ်ဝတ္ထုများ၏ဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏အချိန်ကတည်းကလူသိများအကြိမ်ပေါင်းများစွာထို amplified ပုံသေနည်းဖြစ်ပါတယ် "pyracetam ။ " ဟု phenyl အုပ်စုတစ်စု၏ထို့အပြင်ဥပမာမူးယစ်ဆေး၏ pharmacokinetics အတွက်တိုးတက်မှု (မှတစ်ဆင့်တစ်ခု ပို. ပင်သိသာထိုးဖောက်မှုမှလှူဒါန်းခဲ့ထားပါတယ် ဒါကြောင့်အင်အားကြီးမားပြီးမြန်ဆန်စေသည်ဖြစ်သောသွေးသည်ဦးနှောက်အတားအဆီး) ။
တောင့အတွက် Nootropin phenotropil (phenylpyrazetam) အောက်ပါအရေးယူထားပါတယ်:
•အမြင်အာရုံနှင့်သွေးလည်ပတ်မှုစနစ် (အထူးသဖြင့်ခြေလက်အင်္ဂါ) တိုးတက်ကောင်းမွန်;
• Anti-inflammatory နဲ့ analgesic ဆိုးကျိုးများနှင့်အခြားသူများရှိပါတယ်။
ပစ္စည်းဥစ္စာများသောက်သုံးသော 100 ထံမှ 250 နေ့ရက်ကာလအဘို့တစ်ချိုးဖြစ်စေသည့်အပြီးတစ်လတစ်နေ့လျှင် 30 မီလီဂရမ်မှကွဲပြားခြားနားသည်။ Phenylpyracetam စွဲခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာရောဂါလက္ခဏာတွေဖြစ်ပေါ်စေပါဘူး။
Phenylpiracetam အမှုန့် - ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများနှင့် contraindications
ဘေးထွက်များထဲတွင်သက်ရောက်မှုအားကြီးသော psychomotor လှုံ့ဆော်မှုဖော်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ သငျသညျ4ညနေပြီးနောက်ပစ္စည်းဥစ္စာကို ယူ. , ဒါကြောင့်နံနက်ယံ၌ယစ်မူးဖြစ်သင့်လျှင်အိပ်မပျော်ရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်။ မြင့်မားတဲ့သွေးဖိအားမှကျရောက်နေတဲ့နေသောလူများ, ကအလွန်ပွားများနိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဤကိစ္စတွင်အတွက်, သင်သတိနဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကိုယူသင့်ပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာများအသုံးပြုခြင်းမှအဓိက contraindication တစ်ဦးချင်းစီသည်းမခံဖြစ်ပါတယ်။
Phenylpiracetam အကြောင်းကို reviews
phenotropil (phenylpyrazetam) ၏တောင့အကြောင်းကို reviews စိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဖြစ်ကြသည်။ ယေဘုယျအားမူးယစ်ဆေးယူပြီးလူများကိုတစ်ဦးစွမ်းအင်, vivacity, တိုးတက်လာသောအိပ်စက်ခြင်း, memory နဲ့ခံစားချက်၏တစ်ဟုန်ထိုး, တိုးမြှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုခံစားခဲ့ရသညျ။ အချို့လူများက, ဆန့်ကျင်ပေါ်, သူတို့ကထိနမိဒ္ဓများနှင့်အားနည်းချက်တစ်ခုခံစားမှုအားဖြင့်ကျော်လွှားခဲ့ပြောဆိုထားသည်။ ဒါဟာထိုကဲ့သို့သောတုံ့ပြန်မှုကြောင့်အလွန်အကျွံပင်ပန်း, စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုမှဖွံ့ဖြိုးကြောင်းစိတ်တွင်ဘွားမြင်ရပါမည်။ ဒါဟာဆရာဝန်တစ်ဦး၏ခန့်အပ်ခြင်းမရှိဘဲ phenylpyracetam ယူရန်အကြံပြုသည်မဟုတ်။
မူးယစ်ဆေး doping lists တွင်ဖော်ပြထားသောလျှင်အဲဒါကိုထိရောက်သောကြောင်းယူဆရန်ယုတ္တိဖြစ်ပါတယ်။ သာဒီမှာသာအချိန်တစ်အချို့သောကာလအတွက်ထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်, သင်ပိုမိုပြုလိမ့်မည်။ အဘယ်2ရက်အကြာမှာဖြစ်သွားမလဲ အောက်ခြေလိုင်းငါဒါဆိုရပေမည်ဆိုပါကစွမ်းအင်နှင့်လှုပ်ရှားမှု, ပုံမှန်အတိုင်း nootropil မှဆက်ပြောသည်ခဲ့သည်။ ထိုအ nootropil (အကြောင်း, piracetam သည်) နှင့်ပတ်သက်ပြီး2ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်လုပျဆောငျဖို့ကစတင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာ phenotropil ယူပြီး၏အကျိုးသက်ရောက်မှု, ငါတို့အစစ်အမှန် nootropic အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆိုလိုတာ, 14 နေ့ရက်ကာလ၌စတင်လိမ့်မည်ဟုထုတ်ပြန်သွားလေ၏။ သို့သော်သူ့ကိုရန်သင့်အား vivacity တစ် 2-ရက်သတ္တပတ်တာဝန်ခံရပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါး (နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြား phenyl အုပ်စုသည်) ကိုသည်းခံစိတ်, စွဲထို့ကြောင့်၎င်း၏ရေရှည်အသုံးပြုခြင်းကိုအနတ္တဖြစ်ပါသည်, ဖွံ့ဖြိုးပြီးဖြစ်ပါတယ်။
Phenylpiracetam (Carphedon) အမှုန့် သောက်သုံးသော, ဘေးကင်းလုံခြုံမှု, ဘယ်လောက်သောက်။
ငါတို့သည်သင်တို့ကြောင်းပြောသည်မည်သို့မျှမကိစ္စ "ဟုအဆိုပါမူးယစ်ဆေးလုံးဝလုံခြုံဖြစ်ပါတယ်" ဟုကျွန်တော်3ရက်သတ္တပတ်ထက်ပို၎င်း၏အသုံးပြုမှုကိုအကြံပြုကြဘူး, ဒါကြောင့်လည်းမြင့်မားသောကြောင့်အမြန်နှုန်းမှာအလုပ်လုပ် neurotransmitters သင် exhausts ကယုံကြည်ကြသည်။ တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်, အက Episode phenotropic သုံးစွဲဖို့အကောင်းဆုံး, ဒါမှမဟုတ် 2-3 ရက်သတ္တပတ်၏သင်တန်းများနှင့်တစ်ဦး "Turbo Mode ကို" အဖြစ်ဆက်ဆံသည်။
ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့အဖြစ် nootropic အရေးယူအောင်မြင်ရန်, ကအနည်းဆုံး2ရက်သတ္တပတ်အထက်သောက်ရရန်လိုအပ်သည်။ ထုပ်ပိုးတွင်သင်သည်ဤအံ့ဖွယ်၏စျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်.3ရူဘယ် (800 ရဲ့အဆုံးမှာ) ဖြစ်ပါသည်ကတည်းကကြောင့်, သီးသန့်, clevermind.ru ကစဉ်းစား, 2014 လစီးပွားဖြစ်ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်ခေါ်ဆောင်သွားကြောင်းမြင်လိမ့်မည်။ ဒီတော့3ရက်သတ္တပတ်၏ဧည့်ခံ:
ဒါဟာစမ်းသပ်မှုတွေအသငျသညျ 70 ကီလိုဂရမ်ထက်လျော့နည်းလျှင်လူတစ်ဦး၏အလေးချိန်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမြဲမြံစွာတည်ထားပြီး: 1 တက်ဘလက် (100 မီလီဂရမ်) နံနက်တိုင်း, အဘယ်သူမျှသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်လျှင်, တဦးတည်းကိုပိုမိုပေါင်းထည့်ခြင်းသို့မဟုတ်တစ်ပြိုင်နက်, ဒါမှမဟုတ် 2-3 နာရီအတွင်း ။
သငျသညျ 70 ကီလိုဂရမ်ထက်ပိုနေသောခေါင်းစဉ်: ပြီးနောက်သင်အများဆုံးဖွယ်ရှိတစ်နေ့လျှင် 1 သို့မဟုတ်ပင်2ပြောင်းရန်ရန်ရှိသည်မည်ဟု 3st နှင့်အတူစတင်ပါ။
Carphedon အမှုန့် အဘယ်မျှလောက်ကြာဖြစ်ပေါ်လာအောင်မှယူပါသနည်း
အဆိုပါမူးယစ်ဆေးဖြစ်ပျက်မှုနှုန်းအပေါ်2လုပ်ရပ်များရှိပါတယ်:
1 ။ 5-6 နာရီအတွင်း။ အရောင်များ, တောက်ပစွမ်းအင်, အာရုံစူးစိုက်မှုရှိပါတယ်။ မရှိ Euphoria ပီတိသင်စုဆောင်းစိတ်ပိုင်းဖြတ်ခံစားရပါလိမ့်မယ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ကမူးယစ်ဆေးဝါး၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်တဲ့အခါမှသာဤအမှုကိုနားလည်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ "စဉ်းစား-To-do" အကြားအချိန်သိသိသာသာကိုတိုစေ, ဤအခိုက်မှာသင်အမှားလုပ်ဘူးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ မိန့်ခွန်းကိုပိုမိုလျင်မြန်စွာဖြစ်လာအဆုံး၌, ငါသည်အရာခပ်သိမ်းအကြောင်းပြောဆိုချင်ပေမယ့်မပါအပိုနားရွက်ရှိပါတယ်လျှင်, ရေး, ဖတ်, ပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကို - ငါလူတိုင်းကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာပြောဆိုလိုသောသို့မဟုတ်သင်တို့သည်ဤမျှလျင်မြန်စွာအချို့ကိုသင်စကားလုံးများကိုစားသောစာအုပ်ဖတ်ပါ။ အားကစားသမားလည်းပျော်ရွှင်ကြသည်။
2 ။ 10-14 ရက်အတွင်း။ သမားရိုးကျ nootropics နှင့်အတူအမှုဖြစ်သကဲ့သို့အဆိုပါ memory နဲ့ကျေးအနည်းငယ်, တိုးတက်နေပါတယ်။ တောက်ပ FullHD အိပ်မက်ဖယ်ရှားနေကြတယ်, ဒါကြောင့်သင် "ပဲ့ထိန်းအိပ်မက်" လေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်။
20-60 မိနစ်ပြီးနောက်, သင့်ဇီဝြဖစ် (ဇီဝြဖစ်) ပေါ် မူတည်. ။ Nootropic အကျိုးသက်ရောက်မှု - 10-14 ရက်အကြာမှာ။
5639 Views စာ
Vikram Parmar09 မှာ 21 / 2018 / 10: 26 ညနေ
Mog Arten09 မှာ 21 / 2018 / 4: 25 ညနေ
ငါသည်သင်တို့၏ကိုယျခန်ဓာ Carphedon အမှုန့်ယူခြင်းအားဖြင့်ဖြတ်သန်းသွားပါလိမ့်မယ်အားလုံးပြောင်းလဲမှုများမယုံနိုငျသညျ။ "ပဲ့ထိန်းအိပ်မက်" Nootropics များအတွက်စာရင်းအားလုံးအကျိုးသက်ရောက်မှုထဲကအထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့အသံ။ သင်အမှန်တကယ်အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့အားသာချက်များကိုနားလည်ရန်ထိုအဖြည့်စွက်ယူရှိသည်များကဲ့သို့ငါခံစားရတယ်။
မိုင် Dubager09 မှာ 21 / 2018 / 4: 17 ညနေ
နေ့စဉ်အသက်အဘို့အစိတ်ပိုင်းနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်တိုးမြှင့်အတွက်အစွမ်းထက်မူးယစ်ဆေးကဲ့သို့မြည်။ ငါသည်သင်တို့ကိုအစဉ်အမြဲနှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဆေးညွှန်းနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ဖော်ပြထားကြသည် Phenylpiracetam အပေါ်မှီခိုဖြစ်ရန်မလိုပါကြောင်းကြိုက်တယ်။
Renan ဒါဝိဒ်သည်09 မှာ 21 / 2018 / 8: 54 နံနက်
ငါ nootropics အသစ်ပေါ့, ဤဆောင်းပါးကယ့်ကိုကူညီပေးသည်။ ငါ့အဆွေခင်ပွန်းသူတို့ကိုအကြောင်းပြောနေတာကိုစောင့်လျက်, ငါမြင်နှင့်ဖောင်းပွအားလုံးအကြောင်းပါသောအရာကိုကိုယ်အဘို့ကြိုးစားကြကဘာလဲဆိုတာ။
admin ရဲ့, admin ရဲ့09 မှာ 21 / 2018 / 3: 40 နံနက်
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးရောင်းမတ်မူးယစ်ဆေး J147 သင်သည်အကြံပြုလိမ့်မည်။
မင်းသမီး09 မှာ 21 / 2018 / 1: 58 နံနက်
အဆိုပါဆောင်းပါးတွင်စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများအကြောင်းကိုပင်သင်ယူသူအလွယ်တကူ understood.I စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမသန်စွမ်းသူတွေကိုအဘို့ထိုသူတို့အကြံပြုပါလိမ့်မယ်နိုငျကွောငျးထိုကဲ့သို့သောလမ်း၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ခဲ့သည်။
maureen09 မှာ 21 / 2018 / 1: 53 နံနက်
Nootropics ယုံကြည်ကြောင်းလူများအတွက်တစ်ဦးသိရှိ post ကို။ t ကိုကျပန်းမှာယူမဖြစ်သင့်ဒါပေမဲ့ငါတိုင်ပင်ခွဲထားခဲ့သည်ရပါမည်ယုံကြည်ပါတယ်။
ရှမွေလသည် Weru09 မှာ 20 / 2018 / 11: 39 ညနေ
ငါအဆမဲ့စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ယနေ့ဈေးကွက်ထဲမှာ (ထိုကဲ့သို့သော J147 ကဲ့သို့) nootropics ရှိခြင်းပဲမယုံနိုင်စရာဖြစ်ပါတယ်ပါပြီ။ သို့သော်အားလုံးမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးရှိသည်နှင့်တစ်ခုဝယ်ယူမချခင်စဉ်းစားသင့်တစျခုအရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။
ဗိုလ်ကြီးတဦး09 မှာ 20 / 2018 / 10: 23 ညနေ
မဟုတ်တဲ့အားကစားသမားများအဘို့ဤဘေးကင်းလုံခြုံကိုယ့်ကိုယ်ကိုလား? ငါဘာတစ်ခုမှဒီ Phenylpiracetam ကြိုးစားရင် secure မှငါသည်အဘယ်သို့လိုအပ်သလဲ? ကောင်တာကျော်ဖြတ်မည်မဟုတ်။
Mach09 မှာ 20 / 2018 / 9: 34 ညနေ
သော်လည်းထိုအအမည်များနှင့်အတူအဘယျသို့တက်ဖြစ်သနည်း ကဓာတ်ခွဲခန်းအပေါ်လျှင်ဟုတ်ပါတယ်, သင်တို့သည်ဤမျှသိပ္ပံနည်းကျဖြစ်မတတ်နိုင်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော်ဤနေရာတွင် Nootropics ပတ်သက်. အရာဒီကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းချွတ်လာလိုလျှင်မရလူတိုင်းကသိကြလိမ့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Bradley လာဗင်ဒါ09 မှာ 20 / 2018 / 3: 57 ညနေ
ဒါဟာ Nootropics သည်ကိုယ်ထင်ရှားတိုးမြှင့်သားအပေါငျးဂုဏ်သတ္တိများအံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ အခြားအစမတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုပိုမိုချက်ချင်းသက်ရောက်မှုနှင့်အတူသော်လည်းစျေးကွက်အပေါ်ရှိပါတယ်လျှင်ငါတွေးမိ။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Curt Rancher09 မှာ 20 / 2018 / 3: 53 ညနေ
ငါရုရှားတွင် Phenylpiracetam ရဲ့ဇာစ်မြစ်အထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်များကျိန်းသေရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဆေးညွှန်းအကြောင်းကိုလူနာတွေသတိပေးသင့်ပါတယ်။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဖားအောက်09 မှာ 20 / 2018 / 6: 22 နံနက်
ဒါဟာသေချာဒီဖတျရှုလူတိုင်းနီးပါးကဒီမူးယစ်ဆေးအသုံးပြုချင်ပါလိမ့်မယ်စမတ် drugs.I'm များအတွက်ကောင်းစွာအသေးစိတ် post ကိုဖြစ်ပါတယ်။
Boma09 မှာ 20 / 2018 / 6: 18 နံနက်
ကိုယ့်ကိုငါ့မိတ်ဆွေအနည်းငယ်ဤ link ကိုပေးပို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Nootropics ငါယုံကြည်များစွာသောလူတစ်ဦးသည်အလွန်အသစ်သောမူးယစ်ဆေးနှင့်သူတို့ကိုအတော်လေးသစ်ကိုသူတို့ကအကြောင်းဆရာဝန်တစ်ဦးတိုင်ပင်ဖို့စဉ်းစားနေကြသော်လည်း။
ဒင်း Wright09 မှာ 20 / 2018 / 5: 51 နံနက်
ငါ nootropics သာမှတ်ဉာဏ်ထပ်တိုးဘို့ခဲ့ကြသည်ထင် ??? ငါသူတို့လည်းသင့်ရဲ့ဇီဝြဖစ်ပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမသိခဲ့ပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့။
Trevor ဟော်လန်09 မှာ 20 / 2018 / 5: 49 နံနက်
တကယ်ကဒီဆောင်းပါးသည်အထိ nootropics ပတ်သက်. တောင်းဆိုမှုများမယုံကြည်ခဲ့ပါဘူး။ ငါယခု nootropics ကြိုးစားနေစဉ်းစားတယ်ဘာကြောင့်ဖြစ်သောသူတို့မှအချို့သောတန်ရာပြီထင်ပါတယ်။
Fera09 မှာ 20 / 2018 / 4: 59 နံနက်
ငါ့နှမများသောအားဖြင့်ဒီမှာကပိုကျယ်ပြန့်သိကျန်းမာရေးစတိုးဆိုင်ထဲကတစ်ခုကနေ (ထိုကဲ့သို့သော J147 ကဲ့သို့) သူမ၏ nootropics ဝယ်ယူ။ ငါစည်းမျဉ်းသူမကဆေးဘက်ပညာအတတ်မရှိဘဲသူတို့ကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါသည်အဖြစ်ကဒီမှာဖော်ပြထားသည့် 3-အပတ်ကအရာမှထွက်ထောက်ပြရန်ရှိသည်မယ်!
ပျြောရှငျသော09 မှာ 20 / 2018 / 2: 58 နံနက်
amika09 မှာ 20 / 2018 / 2: 47 နံနက်
ဒါဟာအစဉ်အမြဲတဦးတည်းရဲ့အစိတ်ပိုင်းစွမ်းရည်နှင့်ဤစမတ်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (J147) မြှင့်တင်ရန်ကောင်းသောလိမ့်မည်တဦးတည်းကြောင့်အောင်မြင်ရန်ကူညီပေးပါမည်။ အဆိုပါ doping စာရင်းတွင်ရှိပါတယ်ကောင်းသော။
Kitty Pryde09 မှာ 19 / 2018 / 10: 00 ညနေ
ဤသည်ကိုကျပန်းအားဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားမရနိုငျသောမူးယစ်ဆေးဖြစ်လိမ့်မည်။ ဤသည်သကြားလုံးမဟုတ်ပါဆောင်းပါး Phenylpiracetam ယူဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းကပြောပါတယ်။ ဘယ်ဟာကောင်းတစ်ဦးအရာဖြစ်၏။ ရိုးသားမှုကအမြဲကြည့်ရှုရန်ကောင်းတစ်ဦးအရာဖြစ်၏။
Kurt09 မှာ 19 / 2018 / 9: 56 ညနေ
ဒါဟာစမတ်မူးယစ်ဆေး Phenylpiracetam တူသောအလားတူသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်တဲ့မူးယစ်ဆေးရှိပါတယ်သူတစ်ဦး Brad Cooper ကရုပ်ရှင်အဆမဲ့ငါ့ကိုသတိပေး; Modafinil; Armodafinil; Noopept; Sunifiram; Bromantane ။ ငါသည်ဤသော်လည်းစော်ကားရပါဘူးမျှော်လင့်ပါတယ်။
ဘရန်ဒီ09 မှာ 19 / 2018 / 7: 23 ညနေ
တကယ်ကြောင့်တကယ်ဦးနှောက်အဘို့အထောကျအကူပွုပါလိမ့်မည် (ထိုကဲ့သို့သော J147 ကဲ့သို့) Nootropics အကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့အသိပညာတိုးပွားစေလိုသောသူတို့အဘို့ဂရိတ်သတင်းအချက်အလက်။
Mary09 မှာ 19 / 2018 / 7: 15 ညနေ
(ထိုကဲ့သို့သော Modafinil သကဲ့သို့, Noopept) smart မူးယစ်ဆေးဝါးများငါသည်ဤ aloud.Can စဉ်းစားတယ် one.But ခံရဖို့မလိုချင်သူ့ experts.I နှင့်အတူတိုင်ပင်မရှိဘဲဤချပစ်လိုက်ပါကဆရာဝန်တစ်ဦးရဲ့ဆေးညွှန်းခြင်းဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားရပါမည်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Landen Burrow09 မှာ 19 / 2018 / 4: 59 ညနေ
ကအသုံးဝင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနာရောဂါငြိမ်းစရာလုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာရှိပါတယ်တူသော Phenylpiracetam အသံ။ အဆိုပါ J147 အမှုန့်ကိုလည်းသင်သည်သင်၏ဣန္ဒြေကိုဆုံးရှုံးခွင့်မရှိဘဲသင်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်များအတွက်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေအသံ။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Mozer Torancher09 မှာ 19 / 2018 / 4: 54 ညနေ
အသုံးပြုမှု Phenylpiracetam ဘို့မိမိတို့သက်ရောက်မှုအလွန်အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်နှင့်အတူအထောက်အကူဖြစ်စေကုစားတူသောအသံ။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Marco Antonio09 မှာ 19 / 2018 / 10: 45 နံနက်
ငါသည်ဤဆောင်းပါးတွင်စမတ်မူးယစ် (Nootropics) အကြောင်းဘယ်လောက်ပြည့်စုံစေ့စပ်တန်ဖိုးထားတယ်။ ငါကလုံးဝအသစ်ဒီတော့ငါကအကြောင်းပိုမိုဆောင်းပါးတွေကိုရှာနေပါတယ်။ ဒီတစ်ခုကျိန်းသေကူညီပေးသည်!
ကနေဒီ09 မှာ 19 / 2018 / 10: 43 နံနက်
ငါသည်ဤ Nootropics အကြောင်းကိုဒီတော့စိတ်အားထက်သန်ဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကအကြောင်းငါ့အဆရာဝန်ကိုမေးရန်နှင့်ငါ၏ကိုယ်ထိထိရောက်ရောက် Phenylpiracetam မူးယစ်ဆေးကိုလက်ခံနိုင်ပါလျှင်စဉ်းစားတယ်။ စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါးအဘို့အကြှနျုပျကိုဤအလုံးကိုအသစ်ကဒါကျနော်ကျိန်းသေပိုမိုနက်ရှိုင်းတူးနှင့်ဤအသစ်သောမူးယစ်ဆေးနားလည်သွားတယ်။
ဂျက်စီကာယောန09 မှာ 19 / 2018 / 8: 58 နံနက်
Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး) ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသည်။ သူတို့လည်းကိုယ်အလေးချိန်နှင့်အတူကူညီရန်, ဦးနှောက် function ကိုခိုင်ခံ့စေမကူညီသာ။ ယခုတွင်ငါသည်5နှစ်ပေါင်း Modafinil ယူပြီးခဲ့တာနှင့်အကျိုးကျေးဇူးများကိုတကယ်ထင်ရှားရှိပါတယ်။
Earl ဖြစ်တဲ့ Warner09 မှာ 19 / 2018 / 8: 55 နံနက်
Phenylpiracetam ငါ့ကိုသိသိသာသာကိုယ်အလေးချိန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့င်သင်အမှန်တကယ်စနစ်တကျနှင့်အညီယူဖို့ရှိသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင်ယင်း၏အကျိုးခံစားခွင့်ကိုခံစားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
မာရှယ်09 မှာ 19 / 2018 / 3: 06 နံနက်
မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုပြဿနာနှင့်အတူသူများသည်ကတည်းကကြောင့်မှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးသည်တစ်လှုံ့ဆော်အဖြစ်ဝယ် Phenylpiracetam စမ်းသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာငါယုံကြည်သက်ကြီးရွယ်အိုများဘို့အကောင်းတစ်ဦးတည်းဖြစ်ရလိမ့်မည်။
ဖေလဇ်မင်း09 မှာ 19 / 2018 / 2: 59 နံနက်
ငါ Phenylpiracetam ၏အသုံးပြုသူများသည် (Carphedon) အမှုန့်ရုံမှန်ကန်သောသောက်သုံးသောအားဖြင့်သွားအများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်သက်ရောက်စေမည်ယုံကြည် it.I များ၏အလွဲသုံးစားမှုမှရှောင်ရှားရန်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသို့အကြံပြုသောက်သုံးသောယူမှတ်မိပါလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
Vikram Parmar09 မှာ 18 / 2018 / 10: 54 ညနေ
အားလုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး) မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုပြဿနာဖို့အကူအညီဖြစ်ကြသည်။
admin ရဲ့, admin ရဲ့09 မှာ 18 / 2018 / 10: 37 ညနေ
ဟုတ်ပါတယ်, Phenylpiracetam ယခုစျေးကွက်အတွက်အလွန်လူကြိုက်များနှင့်ပူအရောင်းရဆုံးပါပဲ။
admin ရဲ့, admin ရဲ့09 မှာ 18 / 2018 / 10: 34 ညနေ
ထိုသူအပေါင်းတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အရောင်းရဆုံးထုတ်ကုန်များမှာ! ^ _ ^
ဒါဝိဒ်သည် Tjoe09 မှာ 18 / 2018 / 10: 33 ညနေ
အလေးအနက်ထား, ငါတကယ် Phenylpiracetam ၏စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်ပတ်သက်ပြီးဤနေရာတွင်အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်အများကြီးရပါတယ်။ ငါနီးပါးမရှိသလောက်ငါသည်အနာပျောက်စေသောဖြစ်စဉ်ကိုနှေးကွေးပုံရသည်သော်လည်းသဘာဝကျကျရိုးရာနည်းလမ်းများ / သုံးစွဲဖို့ပိုနှစ်သက်, စျေးကွက်အပေါ်မူးယစ်ဆေးအမျိုးအစားအားလုံးကိုအသုံးပြုပါ။
အဲလက်စ် Summers09 မှာ 18 / 2018 / 8: 54 ညနေ
ကောင်းသောအရာရေးသားသူငါသည်ဤအကြောင်းကိုဘာမှမသိရပါဘူးကတည်းကငါ Phenylpiracetam သောက်သုံးသောနဲ့ကျွန်မကြိုက်နှစ်သက်သမျှကိုဆိုလိုလမ်းညွန်အတွက်ထားရန်အချိန်ကိုယူ။ သို့သော်ကိုယ်ကရနိုင်ခင်ဆရာဝန်တစ်ဦးဆေးညွှန်းလိုအပ်ပါတယ် MY သည်ဤကျန်တာတွေကနေတရားစီရငျ။
Scott Summers09 မှာ 18 / 2018 / 8: 17 ညနေ
ဖော်ပြချက်အပေါ်အခြေခံပြီး, ငါကကူညီပေမယ့် Phenylpiracetam (Phenotropil) ကိုသာပြုပြင်မွမ်းမံသည်၎င်း၏ဖွဲ့စည်းပုံတစ်ခု phenyl အုပ်စုတစ်စု၏ထို့အပြင်ရှိရာအတွက် Piracetam ကနေဆင်းသက်လာတဲ့ racetam မူးယစ်ဆေးကြောင်းကိုသတိထားမိလို့မရပါဘူး။
Moz Chesk09 မှာ 18 / 2018 / 3: 18 ညနေ
အဆိုပါ Phenylpiracetam တောင့နှင့်အမှုန့်ဟာမော်လီကျူးများနှင့်သိမြင်မှုအဆင့်တွင်အလွန်ကြီးစွာသောသက်ရောက်မှုရှိပုံရသည်။ ငါသူတို့အတော်လေးအစာရှောင်ခြင်းအတွက်ကန်အပေါင်းတို့နှင့်တပြိုင်နက် Euphoria ပီတိနှင့်ခန္ဓာကိုယ် fluency တိုးမြှင့်ကြောင်းကြိုက်တယ်။
Maury Cheskes09 မှာ 18 / 2018 / 3: 12 ညနေ
ဤ Nootropics (Phenylpiracetam) ထိုသို့သောအနေနဲ့သင့်ရဲ့စိတ်ကိုအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်ယေဘုယျခန္ဓာကိုယ်စွမ်းဆောင်ရည်ရှိကြီးမြတ်ပါတယ်။ ကျွန်မတစ်ဦးချင်းစီကိုယျခန်ဓာအမျိုးအစားနှင့်သူတို့အလုပ်လုပ်ပုံကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များအတွက်ပဲ့ထိန်းဆေးများရှိပါတယ်ကြိုက်တယ်။ မျှဝေလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
Kuttan09 မှာ 18 / 2018 / 10: 56 နံနက်
Mikaella Clair09 မှာ 18 / 2018 / 10: 37 နံနက်
ငါတကယ်တာငါမရှိသလောက်သူတို့ကိုယူအဖြစ်မတ်မူးယစ်ဆေးဝါးမယုံကြည်ကြဘူး။ ငါစမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး ingesting တကယ်ပိုကောင်းလူများ၏ဘဝများစေပါဘူးထင်ပါတယ်။ ငါမယ့်လူတွေကိုသူတို့ကကျန်းကျန်းမာမာဖြစ်လိုလျှင်သူတို့ကသဘာဝလမ်းစတင်နိုင်ပါသည်သဘောပေါက်စေလိုသည်ဤလေ့လာမှုဆန့်ကျင်ဘူး။
Charlene, G09 မှာ 18 / 2018 / 10: 33 နံနက်
မိန်းမောတွေဝေမိပါတယ်။ သို့သော်လည်းငါသည်ကျိန်းသေကြောင့်အထူးသဖြင့်ငါ၏အမှု၏သဘောသဘာဝနှင့်အတူ, ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုလှုံ့ဆော်ဖို့နှင့်ငါ့အသက်အရွယ်စဉ်းစားတစ်ဦးအခန်းကဏ္ဍကနေပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပုံကို သိ. ဤမူးယစ်ဆေးဝါးများသုံးလို့ရတယ်, ဤကိုယ်အလေးချိန်မှုန် up.So စောင့်ရှောက်ဖို့ခက်ခဲရတဲ့င့်ငါ့အဘို့ကောင်းသောစိတ်ကူးဖြစ်လိမ့်မည်နှင့် ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျနော်နောက်ပိုင်းမှာ sibutramine အမှုန့်ကိုဝယ်ပါလိမ့်မယ်။
Amir Guten09 မှာ 18 / 2018 / 9: 29 နံနက်
Nootropics - ဒီတော့ဒီကိုခေါ်မယ့်အရာဖြစ်တယ်။ အဆိုပါ "စမတ်" လူတွေကရှေ့ဆက်ရဖို့ nootropics နှင့်ကိုယ်ကိုတိုးပွားလာလျက်ရှိသည်။
Amil-lionaire09 မှာ 18 / 2018 / 9: 24 နံနက်
Intellectual ပြဿနာနှင့်အတူကူညီတစ်စုံတစ်ရာ Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး) ရှိပါသလား
မင်္ဂလာ09 မှာ 18 / 2018 / 8: 30 နံနက်
ငါပြင်းထန်ဖိစီးမှတဆင့်သွားကြသည်လူတွေကိုငါကအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မည်ငါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်ကြောင့်ထွက်ကြိုးစားကြလိမ့်မယ် beleve ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များထံမှ Phenylpiracetam ကြိုးစားသင့်စဉ်းစားပါ။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ09 မှာ 18 / 2018 / 8: 24 နံနက်
ဒါကကိုယ့် Phenylpiracetam အမှုန့်ပဲက body.it ပေါ်တွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများကိုချွတ်ဝတ်ဆင်အဖြစ်အခါအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားရန်ကြောက်မက်ဘွယ်လိမ့်မည်ရှိပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုများကဲ့သို့အပေါ်ပိုမိုဖတျရှုပါလိမ့်မယ်ငါ့ထံသို့အသစ်ပဲ Nootropics အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူကြပါပြီဖြစ်ပါတယ် (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး) ။
AJ09 မှာ 18 / 2018 / 1: 34 နံနက်
ဒါကအားလုံးငါ့ထံသို့တော်တော်လေးအသစ်ဖြစ်၏။ ငါတကယ်စသည်တို့ကိုငါစိတ်ဖိစီးမှုပတ်သတ်ပြီးနှင့်အတူလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုအတူပြဿနာမဆိုကြင်နာခဲ့ဖူးပါဘူး (ကျနော်တကယ်ငါသိပ်မကောင်းတဲ့အမှုအရာတွေအများကြီးပေါ် နေ. မသေချာအောင်နှင့်သေချာငါမျှတတဲ့အစာကိုစားပါစေ အစားအသောက်များတွင်နှင့်အတော်လေးကျန်းမာလူနေမှုပုံစံစတဲ့ပါပြီ), နှင့်ဟုတ်တယ်ငါနေမကောင်းဖြစ်ကြောင်းကိုငါအဘို့အဆေးပညာယူရန်လိုအပ်ပါတယ်မဟုတ်လျှင်, မူးယစ်ဆေးဝါးလုပ်နေတာမျိုး) (ငါ့ကိုတွှေ။ ကိုယ့်လုံခြုံ nootropics ငါပင်သင့်လျှင်မည်သည့်နောက်ထပ်ပြုလုပ်မစူးစမျးရှေ့မှာရှိ၏ဘယ်လိုလုံးဝကိုသိလိုကြသည်။ သို့သော်ဤဆောင်းပါးကတဆင့်ရှာဖွေနေကြောင့်လည်းမဆိုးထင်ရစေသည်။
Pritesh Vishwakarma09 မှာ 18 / 2018 / 12: 42 နံနက်
အားလုံး Nootropics သေချာပေါက်သင့်ရဲ့အလုံးစုံကျန်းမာရေးအတှကျကောငျးမဟုတျပါ။ ၎င်း၏မူးယစ်ဆေးဝါးတချို့ကအားကစားပွဲများလူတစ်ဦးအဘို့အကောင်း doping စာရင်းနှင့်မဝင်ရောက်ခဲ့သည်နေကြသည်။
ဂျယ်ရီ09 မှာ 17 / 2018 / 11: 27 ညနေ
ငါသိမြင်မှုနှင့်ခံစားချက်တိုးတက်မှုများအတွက် Phenylpiracetam အမှုန့်ထုတ်ကြိုးစားရန်ခစျြလိမျ့မညျ။ ငါဒါသုန်မှုန်တချို့ရက်ပေါင်းရတကယ့်ကိုတစ်ခါတစ်ရံငါ့အဆင်ခြင်ခြင်းအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ ငါကတကယ်အထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မည်သေချာပါတယ်။
Enyi09 မှာ 17 / 2018 / 11: 19 ညနေ
ဂရိတ်ဦးတည်းဆရာဝန်ကြောင့်ယခုစျေးကွက်အတွက်အကောင်းဆုံး Nootropics အကြောင်းကိုအားလုံးနီးပါးအသေးစိတ်သိရန်ယခုအများကြီးလွယ်ကူပါတယ်ဖြစ်မယ့်။ ဒါဟာတစ်ဦးချင်းစီကိုယျခန်ဓာများအတွက်အကောင်းဆုံးရရန်တစ်ဦးချင်းစီကမူးယစ်ဆေးဝါး features တွေလေ့လာဖို့အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Armodafinil ၏စျေးကွက်အတွက်7အကောင်းဆုံး Nootropics (စမတ်မူးယစ်ဆေးဝါး)	ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရန် 8 မေးခွန်းများကိုမတိုင်မီ Cetilistat အမှုန့်ကိုယူ